आज राति ठूलो मिथुन उल्का वर्षा हुने, कसरी हेर्ने ? नाङ्गो आँखाले हेर्न मिल्छ या मिल्दैन ? - Chandragiri News
Home समाज आज राति ठूलो मिथुन उल्का वर्षा हुने, कसरी हेर्ने ? नाङ्गो आँखाले...
आज राति ठूलो मिथुन उल्का वर्षा हुने, कसरी हेर्ने ? नाङ्गो आँखाले हेर्न मिल्छ या मिल्दैन ?
२०७४, २८ मंसिर बिहीबार ११:५९
सक्रिय समयमा प्रतिघण्टा १२० वटासम्म उल्का देख्न सकिने नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीले जनाएको छ । यो वर्ष देखिने उल्का वर्षा क्षुद्रग्रह ३२०० फेथनले सन् २००९ मा अन्तरीक्षमा छोडेका स–साना धुलाका कण तथा पदार्थले सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने क्रममा पृथ्वीको नजिक हुँदा वायुमण्डलको करिब ७० किमीमाथि जलेर उल्का वर्षा देखिने सोसाइटीका अध्यक्ष सुरेश भट्टराईले बताउनुभयो ।
यो वर्ष क्षुद्रग्रह ३२०० फेथन आफैँ पृथ्वीको नजिक रहनेछ । उल्का वर्षको समयमा उल्काहरु मिथुन राशिबाट निस्किए जस्तो देखिने हुनाले यसलाई मिथुन उल्का वर्षा नामकरण गरिएको हो । उल्का वर्षा हेर्न चाहने सर्वसाधारणले आफ्नो घर नजिकैको प्रकाश प्रदूषण कम भएको स्थानबाट अवलोकन गर्न तथा तस्वीर खिच्न सक्नेछन् । आज राति चन्द्रोदय ३ः५६ बजे र भोलि बिहान सूर्योदय ६ः४६ बजे हुने भएकाले अवलोकनका लागि राति ८ः४५ देखि ३ः५६ बजेसम्मको समय अनुकूल हुनेछ ।
Previous articleचुनावको अन्तिम नतिजा यस्तो रह्यो, अन्तिममा निर्वाचित भए गच्छदार
Next article५० लाख लगानीको ‘चन्द्रागिरि कभर्डहल ‘सञ्चालनमा